Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း)
Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Geldene ဟာ စတီးရွိုက်မဟုတ်သော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးဖြစ်ပြီး အရိုးအဆစ်များ နာကျင်ကိုက်ခဲရောင်ရမ်းခြင်း၊ခါးနာခြင်း၊နောက်ကျောနာခြင်း၊ခြေထောက်ခေါက်ခြင်း၊ဒါဏ်ဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဂျဲလ်အနည်းငယ်ကိုယူပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ နေရာပေါ်ကို လိမ်းပါ။ ပြီးရင် အသာအယာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဆေးလိမ်းပြီးတဲ့အခါ လက်ကို အသေအချာ ဆေးပါ။ ဆေးကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာ သင့်ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
အများအားဖြင့် တနေ့ကို ၃ကြိမ်မှ ၄ကြိမ် လိမ်းရလေ့ရှိပါတယ်။ ဆေးသုံးစွဲနည်းလမ်းညွှန်ဟာ ဆေးဗူးနဲ့အတူတကွ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ပုံမှန်အတိုင်း ဆေးလိမ်းဖို့ မေ့သွားတယ်ဆိုရင် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သင်သတိရတဲ့အချိန်မှာ ဆေးကိုလိမ်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ယခင်အတိုင်း ဆက်လိမ်းသွားပေးပါ။
Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Geldene ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ geldene ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
geldene ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Geldene ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Geldene ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဂျဲလ်ကို မျက်စိနဲ့မထိမိအောင် သတိထားရမှာဖြစ်ပြီး ပေါက်ပြဲနေတဲ့အရေပြားနေရာ သို့မဟုတ် နီရဲပြီးတင်းနေတဲ့ အရေပြားနေရာတွေကို ဆေးမလိမ်းရပါဘူး။ မတော်တဆမှားယွင်းပြီး အဆိုပါ နေရာတွေကို ဆေးလိမ်းလိုက်မိတယ် ဒါမှမဟုတ် ဆေးနဲ့ထိမိတယ်ဆိုရင် ရေနွေးနဲ့ အမြန်ဆုံး ဆေးပစ်ရပါမယ်။
ဂျဲလ်လိမ်းထားတဲ့နေရာတွေကို ပတ်တီးစည်းတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ပလာစတာကပ်တာမျိုးတွေ မလုပ်ရပါဘူး။ ဒီလို လုပ်မယ်ဆိုရင် သင့်အရေပြားက စုပ်ယူမယ့် piroxicam ပမာဏဟာ လိုတာထက် ပိုများသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။piroxicam ကြောင့် သင့်အသားအရေဟာ ခါတိုင်းလောက် နေရောင်မခံနိုင်တာမျိုးတွေကို ခံစားရပါမယ်။
ဒါကြောင့် နေဆာလှုံတာမျိုးကို ရှောင်ရှားရမှာဖြစ်တဲ့အပြင် (သင့်အသားအရေက ဆေးကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲဆိုတာ မသိသေးခင်အထိ) ဆေးလိမ်းထားတဲ့ နေရာတွေကို ပြင်းထန်တဲ့ နေရောင်ခြည်နဲ့ မထိတွေ့ရလေအောင်လည်း ဂရုစိုက်ရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အနီစက်များ ပြင်းထန်စွာ ထွက်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Geldene ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့် စတီးရွိုက်မဟုတ်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးဖြစ်တဲ့ aspirin, ibuprofen, diclofenac, နဲ့indometacin တို့ကိုပါ သုံးစွဲနေရင်ပေါ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Geldene က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Geldene ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အဆိုပါ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက
အရေပြားပြဿနာ – နှင်းခူ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဂျဲလ်အနည်းငယ်ကိုယူပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ နေရာပေါ်ကို လိမ်းပါ။ ပြီးရင် အသာအယာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဆေးလိမ်းပြီးတဲ့အခါ လက်ကို အသေအချာ ဆေးပါ။ အများအားဖြင့် ဆေးကိုတနေ့ ၃ကြိမ်မှ ၄ကြိမ် လိမ်းရလေ့ရှိပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Geldene (ဂျယ်လ်ဒင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
geldene ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
လိမ်းဆေး ဂျဲလ် Piroxicam 0.5%
Geldene ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Accessed November 30, 2016
Feldene. http://patient.info/medicine/piroxicam-gel- for-pain- relief-feldene.